Myanmar Election Hype House 2020 - အစီအစဉ်
ပရိသတ်အချစ်တော်တွေဖြစ်ကြသော အုပ်စိုးခန့်၊ သဇင်နွယ်ဝင်း၊ အေးမြတ်သူ၊ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း) နှင့် ရဲရင့် တို့အပြင် အခြားသော အနုပညာရှင်များ ဖန်တီးထားသည့် Tik Tok video များ၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများကို ရွေးကောက်ပွဲဆုံရပ်လို့ခေါ်တဲ့ Myanmar Election Hype House 2020 - အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဆုံရပ် အစီအစဉ်တွေမှာတော့
ပုရိသတ်ချစ်တဲ့ ကိုရန်လေးနဲ့ Live Video Call လေးပြောကြရအောင်
ပရိတ်သတ်ချစ်တဲ့ ကိုရန်လေးနဲ့ Live Video Call လေးပြောကြရအောင်
နေ့မိုက်၊ ညချော OPPO Reno4 မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို Brand Ambassadors များ ဖြစ်ကြတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်၊ ပိုင်ဖြိုးသု၊ ပိုင်တံခွန် တို့နှင့်အတူ OPPO မိသားစု အနုပညာရှင်များဖြစ်တဲ့ မင်းသွေးခန့်၊ ဟန်နီနွေဦး တို့၏ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဂိမ်းအစီအစဉ်များ၊ Big Bag Band နှင့် လွှမ်းပိုင်တို့၏ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများအပြင် Project K အဖွဲ့သားများရဲ့ အကလှကွက်ဆန်းသစ်မှုများဖြင့် ခမ်းနားစွာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့် ကျင်းပသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
COVID-19 ပြီးသွားပြီ၊ အရင်လိုနေချင်သလိုပြန်နေလို့ရပြီလို့ မတွေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီး ကိုရိုနာကပ်ဘေးမပြီးသေးပေမဲ့ လူတွေပေါ့လျော့လာတဲ့အပေါ် သတိပေးပြောပြလာတဲ့ Hello ဆရာဝန် မှ ဒေါက်တာ သူရိန်လှိုင်ဝင်း #PSA #COVID19
Mask တပ်တာမှန်ရဲ့လား ...
COVID-19 နဲ့တခြားရောဂါပိုးမွှားတွေကူးစက်မခံရဖို့ Mask တပ်တဲ့အခါ မှန်မှန်ကန်ကန်၊ နည်းလမ်းတကျတပ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ Mask ကိုဘယ်လို စနစ်တကျ တပ်ရမလဲဆိုတာကို တောင်ဒဂုံ Fever Clinic မှာပရဟိတဆရာဝန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဒေါက်တာကျော်ဇင်သန့်မှ အခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ #PSA #COVID19 #DrKyawZinThant #TheVoice
ကိုယ်ခံအားကောင်းနေအောင် ဘာတွေစားပေးရမလဲ ?
ဒီလိုအချိန်မှာ COVID-19 နဲ့ ရာသီတုပ်တွေးရောဂါပိုးတွေကူးစက်မခံရစေဖို့ ကိုယ်ခံအားကောင်းနေအောင် ဘာတွေစားပေးရမလဲ ? #PSA #COVID19 #DrKyawZinThant
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ရိုးရိုးအအေးမိ၊တုပ်ကွေးဖျားနာ ရောဂါလက္ခဏာ ဘယ်လိုကွာခြားလဲ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ရိုးရိုးအအေးမိ၊တုပ်ကွေးဖျားနာ ရောဂါလက္ခဏာ ဘယ်လိုကွာခြားလဲ ဆိုတာကို တောင်ဒဂုံ Fever Clinic မှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဒေါက်တာကျော်ဇင်သန့် က အခုလိုပဲ ပြောပြပေးထားပါတယ်။ #PSA #COVID19 #DrKyawZinThant
COVID-19 ကပ်ဘေးကြီးကမပြီးသေးပေမယ့် လူတွေကဂရုစိုက်ဆင်ခြင်မှုလျော့နည်းလာချိန်မှာ
COVID-19 ကပ်ဘေးကြီးကမပြီးသေးပေမယ့် လူတွေကဂရုစိုက်ဆင်ခြင်မှုလျော့နည်းလာချိန်မှာ မဖြစ်မနေဈေးသွား၊အလုပ်သွားနေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ရမယ့် အချက်တွေကို တောင်ဒဂုံ Fever Clinic မှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဒေါက်တာကျော်ဇင်သန့် က အခုလိုပဲ ပြောပြပေးထားပါတယ်။ #PSA #COVID19 #DrKyawZinThant
ConceptX Online ပညာသင်ကြားရေး App အကြောင်
ရန်ကုန်မြစ်၊ တွံတေးတူးမြောင်းနဲ့ ခနောင်တိုချောင်းဆုံရာမှာရှိတဲ့ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့ ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်က လှေနဲ့ သင်္ဘောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်နေတဲ့ သင်္ဘောပြင်လုပ်သားတွေရဲ့ ဘဝတွေကို တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။